अभिनयमा करियर बनाउने छु - तीन प्रश्न - साप्ताहिक
५ फिट १० इन्च अग्ला तेन्जिङ शेर्पा बहुप्रतिभाशाली छन् । अभिनय, गायन, मोडलिङ, फेसन डिजाइनिङदेखि इभेन्ट म्यानेज्मेन्टसम्ममा तेन्जिङले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय भने तेन्जिङ अभिनयमा केन्द्रित देखिन्छन् । वैशाख १२ को भूकम्पपछि सांगीतिक क्षेत्रमा भूकम्पको पीडा बिर्साउने शैलीका दर्जनौं म्युजिक भिडियो निर्माण भए । ती भिडियोमध्ये अधिकांशमा भूकम्पपछि मच्चिएका विध्वंसका दृश्य समेटिएका छन् । मोडल तथा अभिनेता तेन्जिङ शेर्पाले यो अवधिमा आधा दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । भूकम्प गएको दोस्रो दिनदेखि नै राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा समेत सक्रिय कलाकार शेर्पाले अभिनय गरेका भिडियोहरूमध्ये गायक गोविन्द गुरुङको स्वरको ‘आऊ एउटा मुस्कान’ गीत दर्शकको रोजाइमा परेको छ । डब्बु क्षेत्री निर्देशित चलचित्र ‘राहदानी’ मा अभिनेताका रूपमा डेब्यु गरेपछि तेन्जिङ शेर्पा समुदायकै ‘प्रथम अभिनेता’ समेत ‘भएका छन् । तेन्जिङले विगतमा पनि गायक उदय सोताङसहित केही गायक–गायिकाका म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका थिए । कन्टेन्पोररी आर्ट एन्ड फेसन टेक्नोलाजी काठमाडौंबाट डिजाइनिङमा ‘डिप्लोमा’ गरेका तेन्जिङलाई नेप्लीज फेसन होममार्फत हेमा मानन्धरसंग सहकार्य गर्दै नेपालमा जातीय रूपमा सौन्दर्य प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने श्रेय पनि जान्छ । यतिबेला अभिनयमा सक्रिय तेन्जिङ चाँडै नै आफ्नै स्वरको पहिलो एल्बम पनि सार्वजनिक गर्दैछन् । उक्त एल्बमको म्युजिक भिडियोको छायांकनस्थलमा व्यस्त तेन्जिङसँग साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईको तीन प्रश्न :
अभियन रहर हो कि बाध्यता ?
केही वर्षअघि रहरैरहरले केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको थिएँ । चलचित्र ‘राहदानी’ मा अभिनेताको भूमिका निर्वाह गरेपछि अब यसैमा करियर बन्ने सम्भावना देखेको छु ।
फेसन डिजाइनिङ पढे पनि त्यसमा करियर बनाउनुभएन ?
फेसन डिजाइनिङचाहिं मेरो रुचिको विषय हो । करियर नै बनाउने उद्देश्यले फेसन डिजाइनिङमा स्नातकसमेत गरें । सीप र दक्षता हासिल गरेकाले भविष्यमा यो विधामा पनि कदम बढाउन सक्छु ।
आफ्नै स्वरको पहिलो एल्बमलाई अन्तिम रूप दिँदैछु । ‘राहदानी–२’ को छायांकनमा पनि व्यस्त हुँदैछु । त्यसका साथै मनोरञ्जनका विभिन्न पाटामा सक्रिय हुँदै यो क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्य लिएको छु ।